Nahazo Aingam-panahy Tamin’ny Mpanoratra Nizeriana Iray, Hita Amin’ny Aterineto Ankehitriny Ny Fampiroboroboana Ny Teny Yorùbá · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2017 5:12 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Português, English, Español, English
Sary sy soratra Yoruba noforonin'i Ọmọ Yoòbá tamin'ny Fanamby Sary sy Soratra ho an'ny Tenindrazana
Tamin'ny taona 1938, nanoratra ny tantara “Ògbójú Ọdẹ nínú Igbó Irúnmalẹ̀” (Ny Alan'ny Devoly An'arivony), izay sokajiana ho tantara voalohany nosoratana tamin'ny teny Yorùbá ilay profesora Nizeriana efa maty Daniel Olorunfẹmi Fagunwa. Ny literatiora sangan’ asany dia matetika mampiseho ireo mpihaza Yorùbá nanana fahasahiana (aventure) mahafinaritra niainana izay nitarika azy ireo hiatri-tava amin'ny mpanjaka, Andriamanitra, fanahy sy ny herin'ny maizina, manampy amin'ny fankalazana ny kolontsaina Yorùbá avokoa izany rehetra izany.
Sarin'i Ọmọ Yoòbá , nahazoana alalana.
Nanome aingam-panahy ho an’ ireo olona nisafidy hanome voninahitra ny kolontsaina sy ny teny Yorùbá amin'ny fomban'izy ireo manokana ihany koa ireo sanganasa ireo, anisan'izany ohatra i Adéṣínà Oríyọmí Ọlásúnkánmi Ayẹni Àkàndá na Ọmọ Yoòbá (Ny Ankizy Yorùbá), satria maniry ny hampisy izany amin'ny aterineto izy. Tamin'ny antsafa fohy niarahana tamin'ny Rising Voices, nilaza i Ọmọ Yoòbá fa nanova ny fiainany ny famakiana ireo saganasa ireo:
Niova pejy vaovao ny fiainako, ka nivoady hanao fikarohana bebe kokoa momba ny firazanako aho. Noho izany, taorian'ny fianarana sekoly ambaratonga faharoa, nitombo ny zavatra mahaliana, nanomboka nanatsara ny fahaizako manoratra, mamaky teny sy miteny aho. Ary taorian'ny fianarako polyteknika momba ny Fifandraisana Ankapobeny, fantatro fa tsy maintsy manaparitaka ny teny Yorùbá manerana izao tontolo izao aho ary ny fomba mora sy tsotra mora indrindra hanaovana izany dia amin'ny alalan'ny tambajotra iraisam-pirenena amin'ny solosaina.
Tamin'ny voalohany, niezaka nikitika sehatra maromaro izy, anisan'izany ny fananganana bilaogy sy fantsona YouTube, saingy nijanona tao amin'ny Twitter ho fitaovana nosafidiany izy tamin'ny farany. Ny sehatra bilaogy bitika tamin'ny alalan'ny kaontiny @yobamoodua dia manome vokatra mampiroborobo betsaka ny fiteniny sy ny kolontsainy, ary koa mandray anjara matetika amin'ny tenirohy #LearnYoruba. Manondro ny anarany ho mariky ny sioka tiany alefa izy
Izaho no Ọmọ Yoòbá, ka inona ny zavatra tiako alefa sioka ankoatra ny Yorùbá? Ny sioka alefako 24/7 dia vaovao momba ny kolontsaina, manomboka amin'ny teny hatramin'ny fomban-drazana, daty manan-danja teo amin'ny tantara, zava-nitranga ara-tantara, siansa Yorùbá; fitsaboana, teknolojia, astronomia, sy momba ny firazanana tsara rehetra.
Ìrèní = efatra andro (ewúrẹ́ jín sí ọ̀fìn, ó gbé inú ọ̀fìn fún ìrèní ➡️ nianjera tany an-kady ny osy, nijanona tao nandritra ny efatra andro) #InYoruba (amin'ny teny Yorubà)
Raha nilaza izy fa misy ny fivoarana vita tamin'ny fisian'ny teny sy ny kolontsaina bebe kokoa tamin'ny aterineto, mbola mahita izy fa misy ny asa tokony atao. Antony iray, nilaza izy fa ny safidy handika teny mankany na avy amin'ny teny Yorùbá ao amin'ny Google Translate dia mbola manome vokatra tsy marina ara-pitsipi-pitenenana. Mandray ny Yorùbá ho teny Vietnamiana ihany koa ny safidy fandikan-teny mandeha ho azy ao amin'ny Twitter.
Na izany aza, ny fitaovana izay nosafidiany hampiasaina dia manome fomba tokana hizarana vaovao momba ny kolontsaina, tahaka ity lahatsary YouTube ity izay maneho ny fiavian'ny olona Yorùbá sy ny tantaran'i Oduduwa:
Na dia afaka mandray anjara amin'ny fanomezana sehatra ho an'ny Yorùbá aza ny teknolojia mba hahita ny toerany mitovitovy amin’ ny teny hafa manerantany, Mihevitra i Ọmọ Yoòbá fa manomboka any an-trano ny fandraisana andraikitra. Na dia izany aza, mety manova ny fomba fijerin'ny olona iray momba ny maha zava-dehibe ny teny ny fahitàna ny teny amin'ny aterineto :
Ny olana lehibe dia avy amin'ny mpiantsehatra voalohany amin'ny fandrindram-piarahamonina; dia ny fianakaviana. Tsy mampiasa ny teny na mandrisika ny zanany hampiasa ny teny ny ray aman-dreny, maro ireo tsy miraharaha ny teny fa mandray izany ho iray amin'ireo teny tsy mandroso, ka lazao amiko, mety ho liana amin'izany teny tsy mandroso izany ve ny olona tahaka izany raha mahita ny teny anaty aterineto?
Azo antoka fa afaka manintona ny teknolojia, saingy manana drafitra hikarakara hetsika ivelan'ny aterineto i Ọmọ Yoòbá, natao hampitomboana ny fahitàna ny teny. Amin'ny volana Mey 2017, hotontosaina ao Lagos ny fifaninanana quiz sy adihevitra amin'ny teny Yorùbá, ka hifanandrina mba hahazo loka ireo mpianatra ary antenaina handrisika ny tanora ho lasa mpampiroborobo mavitrika ny teniny izy ireo.
Nofehezin'i Ọmọ Yoòbá ny antony iasany mba hahazoan'ny teniny sy ny kolontsainy toerana ao amin'ny aterineto:
Manana tantara lazaina izahay, tantara mbola tsy hitan'izao tontolo izao, omeo anay ny fahafahana hilaza izany ary ho toerana tsara kokoa ho a'ny rehetra izao tontolo izao